उखु किसानमा समर्पित विशेष एपिसोड : किसान र मन्त्री सीधाकुरामा लाइभ (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
उखु किसानमा समर्पित विशेष एपिसोड : किसान र मन्त्री सीधाकुरामा लाइभ (भिडियो)
काठमाडौं, १७ पुष । न्यूज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४७७ औं एपिसोड हो ।
कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा विशेष गरी आन्दोलनरत उखु किसानहरुको मागको विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै उखु किसान
काठमाडौं । विगत ६ वर्षदेखि चिनी उद्योगीले उखुको मूल्य नदिएको भन्दै किसानहरु आन्दोलित छन् । काठमाडौंको माइतीघरमा दुई सातादेखि धर्नामा रहेका उखु किसानका माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
बक्यौता चुक्ता नगर्ने चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न पत्रचार गरेको बताएपनि अहिलेसम्म न पक्राउ नै ग¥यो न त पैसा नै तिर्न लगायो । सरकारी अनुदानबाटै ठगिएको उखु किसानलाई माघको पहिलो सातासम्म भुक्तानी दिने आश्वासन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखिका सर्लाही, सिराहा रौतहटका ६ भन्दा बढी उद्योगले करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उखु किसानको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तिमध्ये महालक्ष्मी, अन्नपूर्ण चिनी मिलका उद्योगीले बक्यौता नदिई उल्टै उद्योग बन्द गर्ने सम्मका चुनौती दिएका छन् ।
महालक्ष्मीले चिनी मिलले २० करोड र अन्नपूर्णले ४० करोड रुपैयाँ किसानको पैसा दिएको छैन । सबैभन्दा बढी राम सुगर मिलले ४२ करोड रुपैयाँ पैसा दिन बाँकी छ ।
२. कसले समाधान गर्छ उखु किसानका समस्या, के गर्दैछ सरकार ?
काठमाडौं, १७ पुष । चिनी उद्योगीहरुले उखु किसानको १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् ।
हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवालको श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड, राकेश अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ४० करोड, राकेश अग्रवालकै इन्दिरा सुगर मिलले १० करोड, स्व. मणिष अग्रवालको लुम्बिनी सुगर मिलले १० करोड, वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले २० करोड, राम थापा र जगदीश अग्रवालको बागमती सुगर मिलले ११ करोड रुपैयाँ किसानलाई ठगेर आफ्नो पेट भरेका छन् ।
यो त बक्यौता मात्रै भयो । अझ कतिपय उद्योगीहरुले त सरकारले पठाएको अनुदान समेत किसानलाई दिएका छैनन् । सरकार र चिनी मिलले दिनुपर्ने अनुदानसहित २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उद्योगीहरुले किसानलाई दिन बाँकी नै छ ।
चिनी उद्योगीहरुले सोझा उखु किसानलाई मात्र होइन दुई तिहाईको बलियो सरकारलाई समेत ठगेका छन् । बजारमा चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ भएको समयमा आफूहरुले ५३ रुपैयाँमा बेचेको दाबी गर्दैै अन्य देशबाट हुने चिनीको आयातलाई रोक्नुका साथै भन्सार मूल्य ५० प्रतिशत बढी लिन दबाब दिएका थिए ।